DHL Madagascar : nanentana momba ny tontolo iainana | NewsMada
DHL Madagascar : nanentana momba ny tontolo iainana
Namarana ny fanentanana momba ny fampianarana mikasika ny fiarovana ny tontolo iainana na ny “Go teach goes Green” ny faran’ny herinandro teo ny mpiasa ao amin’ny DHL Madagascar. Nandritra ny herinandro ny fanentanana izay niarahana tamin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Nisy ny fampiofanana momba ny fambolena an-tanàn-dehibe ho an’ny mpiasan’ny DHL teny Ivato sy Ankorondrano. Nahay namboly karazana legioma tao anaty tavy ireo mpiasa taorian’ny fiofanana. Nahay nanodina ny tavoahangy plastika ho azo ambolena voninkazo sy legioma ihany koa izy ireo tamin’izany.
Azo atao ny mamboly na dia ao anaty birao sy ny toeram-piasana aza satria sady ravaky ny trano no miaro ny tontolo iainana ary indrindra manampy amin’ny sakafo.
Nisitraka ny fahaizana ity fambolena tsotra nefa azo ampiharina ity ihany koa ireo tanoran’ny SOS Village, mianatra asa ao amin’ny DHL Madagascar.
Nifarana ny faran’ny herinandro teo nandritra ny Global Volunteer Day (GVD) de DHL ny fanentanana momba ity fiarovana ny tontolo iainana ity.
Nisy ny fanolorana fitaovana ho an’ny tranomboky ao Analakely ao anatin’ny fanamarihana ny faha-20 taona. Nohavaozin’ireo mpiasa an-tsitrapo avy amin’ny DHL ihany koa ity tranomboky ity haha te honina sy hahasarika indray ireo mpitia vaky boky.